“Taleefankiisa ayaaba iga Luma xitaa haddii aan Gar gaar waydiisan lahaa Arsene Wenger.” Eboue oo SHIID dartii isku dili gaaray – Gool FM
“Taleefankiisa ayaaba iga Luma xitaa haddii aan Gar gaar waydiisan lahaa Arsene Wenger.” Eboue oo SHIID dartii isku dili gaaray
Byare December 24, 2017
(England) 24 Dis 2017. Daaficii hore ee Arsenal Emmanuel Eboue ayaa qiray inuu ku farxi lahaa oo aqbali lahaa caawimaad kaga timaada kooxdiisii hore ee Gunners amaba ururka xirfadlayaasha kubbada cagta.
34-jirka ayaa daaha ka rogay inuu qarka u fuulay inuu shiid dartii isku dilo.
Laacibka reer Ivory Coast ayaa iminka waqtigiisa ku qaata inuu iska qariyo dadka deymaha ku leh, mararka qaar uu jiifto dhulka guriga mid ka mid ah saaxiibadiisa, inuu ku safro basaska caadiga ah iyo xitaa inuu dharkiisa ku dhaqdo labadiisa gacmood maxaa yeelay ma awoodo Mashiinka wax lagu dhaqo.
Wareysi xasaasi ah uu siiyay Mirror Sport ayuu ku yiri.
“Waxbadan ayaan la hadli jiray Arsene Wenger laakiin waxaa iga lumay taleefankeygii ay ku jireen dhammaan lambarada sidaa darteed iminka lama xiriiro isaga.
“Waan aqbali lahaa caawimaad meeshey doonto haka timaadee, laakiin haddii kooxdeydii hore aan waqtiga ku soo qaatay dooneyso inay i caawiso aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa waana soo dhaweyn lahaa.
“Waxaa laga yaabaa inaan halkaa aadi karo aana ka shaqeyn karo si aan u caawiyo ciyaartoyda yar yar.
“Xitaa taageerayaasha Arsenal ilaa iminka way i jecelyihiin.
“Ururka xirfadlayaasha kubbada cagta way i caawiyeen markii ay dhibaato na dhex tiilay wakiilkeyga.
“Haddii ay i siiyaan shaqo xitaa haddii aysan ahayn mid wayn. Sida ay dadku iigu caawiyeen inaan noqdo laacib xirfadle ah ayaan anna u doonayaa inaan u caawiyo kuwa yar yar.
“Aad ayay u adkaan doontaa maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan weli ciyaari karo waxaana doonayaa inaan sii wato ciyaaraha. Sidaa darteed haddii ay i siyaan shaqo ceynkaa oo kale ah oo aan tababare ugu noqdo wiilasha yar yar, waxaa laga yaabaa inaan arko dadkii aan horey u soo wada ciyaarnay mise aan ciyaaraha isaga hornimid aana ceyb dareemo markaas, laakiin intaa kaddib waan la qabsan lahaa.”.
Wasiirada Cayaaraha Maamul Goboleedyada dalka oo ku baaqay in qaybtooda laga siiyo hay,adaha Sportska dalka,iyagoo sheegay in ay hakiyeen wada shaqeentii Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo shaaciyay xilliga la ciyaari doono Super Cup-ka Soomaaliya